केशवराज जोशी काठमाडौं, २१ जेठ
सविन गौतम केही समयअघिसम्म पुतलीसडकस्थित सेयर मार्केटअगाडि ठेलामा म:म: बेचेर गुजारा गर्दै आएका थिए । आम्दानी राम्रै थियो । घर खर्चबाहेक मासिक ७० हजार रूपैयाँसम्म आमदानी हुन्थ्यो । भाडा पनि मासिक ५ हजार रूपैयाँ मात्र थियो ।
सेयर मार्केटको भुइँतल्लामा सिँढीमुनि मुश्किलले २ जना मात्र अट्ने साँघुरो ठाउँ थियो । त्यहीँ बसेर उनी र उनका भाइ पालैपालो म:म: बेल्ने र डल्ला तयार पार्ने काम गर्थे । यो काममा कहिलेकाहीँ बुबाको पनि साथ रहन्थ्यो ।
सेयर मार्केटअगाडिको सडकपेटीमा ठेला राखिएको थियो, जहाँ टाढाटाढाबाट समेत म:म: खान आउनेको भीड हुन्थ्यो । एक पटक सविनको ठेलामा म:म: चाखेको मान्छेलाई त्यहाँको स्वादले निरन्तर तानिरहन्थ्यो । त्यसमाथि उनको सरसफाइ र अन्य व्यवस्थित तरिकाले सबैलाई आकर्षित गर्थ्यो ।
महानगरीय प्रहरीको टोली आयो र सविनको ठेला उठाएर लग्यो । महानगरका कर्मचारीहरूका लागि त्यो काम सामान्य नियमित कामजस्तै होला तर सविनको भने सर्वस्व थियो त्यो । जीवन चलाउने एउटै आधार त्यही ठेला नै थियो ।
महानगरले सविनको ठेला मात्र होइन, त्यस्ता अरू पनि थुप्रै ठेलाहरू उठाएको थियो । ठेला उठाउने अभियान नै चलेको थियो त्यसबेला । जसजसले पैसा खुवाउन सके, उनीहरूको ठेला बच्यो, बाँकी सबैको उठाइयो । ठेलाले शहरी सौन्दर्य बिगारेको र बाटोमा अवरोध भएको भन्दै करिब डेढ वर्षअघि सरकारले ठेला हटाउने अभियान नै चलाएको थियो ।
ठेला हटेपछि तनावमा आएका सविनले अलिक व्यवस्थित तरिकाले व्यापार गर्ने सोच बनाए । उनले रेस्टुरेन्ट चलाउन खोजे तर त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्थ्यो, जुन उनीसित थिएन । उनले २० लाख रुपैयाँ ऋण गरे अनि दरबारमार्गमा नाङ्लो म:म: पसल खोले । सटरको भाडा थियो- मासिक ५० हजार रुपैयाँ । सविन भन्छन्, ‘जानेको काम त्यही थियो, त्यसैले अन्त हात हालिएन ।'
ठेलाको जस्तो राम्रो व्यापार नभए पनि रेस्टुरेन्टले सामान्य रूपमा गति लिँदै थियो । रेस्टुरेन्ट सुरु गरेको १ वर्षजति हुँदा उनलाई विस्तारै ग्राहकहरूले चिन्न थालेका थिए । पुराना ग्राहक दोहोरिने र नयाँ ग्राहक थपिने क्रम चलेको थियो । यतिकैमा कोरोनाको सन्त्रास छायो । लकडाउन सुरु भयो । पसल बन्द गर्नुपर्‍यो । केही दिनका लागि मात्र होला भनेको सङ्कट गहिरिँदै गयो । व्यापार चौपट भयो । ब्याज थपिँदै गयो ।
कोरोनाको सङ्कट कहाँसम्म लम्बिन्छ र यो लकडाउन कति समयपछि हट्छ ? त्यसको यकिन छैन । तर, मासिक ५० हजार रुपैयाँ घरभाडामा गइरहेको छ उनको । आम्दानी त भएन नै, उल्टै खर्च बढेकाले अहिले उनलाई भविष्यमा भातकाे जाेहाे नै के होला भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको छ रातदिन ।
घरभाडालगायतका सबै खर्च कटाएर औसतमा मासिक करिब ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी थियो । करिब १ वर्षअघि विवाह गरेका सविनलाई उनकी श्रीमतीसहित परिवारका ५ जना सदस्यले सघाएका छन् । उनीहरूले सबै परिवार मिलेर रेस्टुरेन्ट चलाएका थिए । यसका अतिरिक्त ५ जना कामदार पनि राखेका थिए ।
सविनकी श्रीमती दुर्गा स्वदेशमै केही गर्ने मनशायले जापान छाडेर नेपाल आएकी हुन् । सबै परिवार सँगै काम गरेर उनी सन्तुष्ट पनि थिइन् । तर, यो लकडाउनले चिन्ता बढाएको छ । अन्योल सिर्जना गरेको छ । उनको नाङ्लो म:म: पसलवरपरका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पसल खोल्न पाए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ उनीहरूलाई । तर, अहिले पसल खोल्ने अनुमति छैन । उल्टै २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ सरकारले ।
'बाटोमा हिँड्न नदिने, सवारी साधन चलाउन नपाइने तर कर तिर्नुपर्ने !', उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कर तिर्न कसरी जाने ? फेरि समयमा कर तिर्न सकिएन भने सरकारले जरिमाना बढाउने हो कि भन्ने त्रास पनि छ मनमा ।’
अहिले २७ वर्ष टेकेका सविन दिक्क मान्दै भन्छन्, 'यो कोरोना पनि हामीजस्तै साना उद्यमीलाई समाप्त पार्न आएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।'
सविनकै दाजु पर्ने उमेश गौतम अहिले ३० वर्षका भए । मण्डिखाटार-रत्नपार्क रुटमा माइक्रो चलाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका उनलाई आफ्नै व्यवसाय गर्ने सोच पलायो । आफ्नो सपनालाई मूर्त रूप दिन उनले १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर एउटा ट्याक्सी खरिद गरे ।
ट्याक्सीका लागि उनले सानिमा बैंकबाट ऋण लिएका थिए, जसको मासिक २२ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्दै आएका छन् । ३ वर्षमा ३ लाख रुपैयाँ किस्ता तिरिसक्दा करिब ८० हजार रुपैयाँ मात्र घटेको छ । उनी तिरेको तिर्‍यै छन् तर ऋण घट्नुको नाम लिँदैन । यसै पनि बैंकको ऋणबाट वाक्कदिक्क भएका उमेशलाई यो लकडाउनले थप समस्यामा पारेको छ ।
यसपालि त किस्ता नहालेको पनि ३ महिना भइसक्यो । ‘अब यसको पनि जरिमाना लाग्छ होला', उमेश भन्छन्, ‘हामीलाई त बाँच्नै मुश्किल भइसक्यो ।’
सविन र उमेश त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यो देशमा यस्ता साना व्यवसायीहरू कति होलान्, जसलाई लकडाउनले गम्भीर सङ्कटमा पारेको छ । ठूला व्यापारीहरूको सबैतिर पहुँच छ, सरकारसित सिधै 'बार्गेनिङ' गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यसैले उनीहरूका वास्तविक र बनावटी दुवैथरी समस्याको चर्चा हुने गर्छ तर साना व्यापारीहरूले त आफ्ना समस्या राख्न ठाउँसमेत भेटेका छैनन् ।
सबै थोक दाउमा राखेर यसरी व्यवसाय थालेका साना व्यापारीहरूप्रति जिम्मेवार सबै निकाय र सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने यिनीहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २१, २०७७, १०:२१:००